musha nyika dzakabatana Comedians Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeMamerican mudyidhi uye mutevedzeri ane zita rezita “Chokoreti Droppa". Our Kevin Hart Childhood Story Nhoroondo ye Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, hukama hwehukama, hupenyu hwehupenyu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvishoma zvinonyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva kuti anonyatsoshandisa sei comedy mukuita. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kevin Hart's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga, Kevin Darnell Hart akaberekwa musi we 6th waJuly 1979 kuFiladelphia muPennsylvania, USA Aiva wechipiri pavana vaviri vakazvarwa naamai vake, Nancy Hart uye kuna baba vake, Henry Witherspoon.
Kevin Hart Vabereki Nancy naHenry.
IAmerica yenyika yeBlack marudzi pamwe neAfrica-America inobva kumhuri yepakati-kati uye yakakurira kumusha kwake kuFiladelphia kwaakakurira pamwe nehanzvadzi yake, Robert Hart.
Kevin Hart anorumbidza kubva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure uye akarererwa kuPhiladelphia.
Kukura muFiladelphia, wechidiki Kevin aiva nehutano hwehuduku hwakanga huri kuratidza hupenyu hwemhuri yake. Baba vake vaiva muropa wekhocaine uyo tsika yezvinodhaka yaiva nemigumisiro yakaipa pamhuri. Nokudaro, Kevin akashandura kuva kuseka uye kunyoresa senzira yekugadzirisa matambudziko mumhuri yake.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo yaKevin kumashure inosanganisira zvidzidzo zvake kuGeorge Washington High School. Ndichiri pachikoro, Kevin haachatarise sekuseka uye kuseka sekutiza asi chiitiko chakakosha.
Kevin ainyanyoita zvemitambo uye kuseka panguva yake yechikoro chesekondari.
Paakapedza chikoro chesekondari, Kevin akapfuurira kuenda kuCommunity College yePhiladelphia kwaakadzidza muchidimbu. Akaenderera mberi achishanda semuchengeti wehangu paBrckton, Massachusetts asati aita pfungwa dzake kuti aite basa rekudhika.
Kevin Hart akadzidza muchidimbu kuCommunity College yePhiladelphia uye akashanda mabasa asinganzwisisike asati aona basa remumhanzi.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Nhoroondo yakanyorwa yeKevin yekutanga yebasa anoedza mumakomiki yakadzokera kumitambo yake yeamateur mumakirabhu kuFiladelphia. Iye akazotevera aine gig yake yekutanga kuLaff House muPhiladelphia pasi pezita "Lil Kev".
Kevin Hart aka "Lil Kev", akasimuka pabasa rake mukuseka mumakirabhu muPhiladelphia.
Zvisinei, basa raKevin harina kunyora kuvimbisa kufambira mberi. Aigara achirohwa pachikuva uye akambo kandirwa chidimbu chehuku. Asingatyi, Kevin akawana chipangamazano mune veteran comedian, Keith Robinson uyo akamudzidzisa tambo dzebasa.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Achifambira mberi, Kevin akatanga kutora kubudirira nemamhanzi. Dambudziko rekupedzisira raakakwanisa kukurira raiva kuwana nzira yakasiyana. Akagadzirisa izvi nekurondedzera zviitiko zvake zvehupenyu uye kusavhiringidzwa mumitambo inoseka.
Kevin Hart akawana chimiro chake chakasarudzika mumakomiki nekurondedzera ake ehupenyu zviitiko uye kusagadzikana muhunhu hunhu.
Moreso, makomiki maratidziro aakatanga pakati pe2009 - 2013 aive nezvinhu zvehupenyu hwake zviitiko mumazita avo. Iwo maratidziro anosanganisira 'Ini Ndiri Mudiki Akakura,' 'Zvakanyanya Kunakidza,' 'Kuseka Kurwadziwa Kwangu' uye 'Rega Nditsanangure'.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Kumuka Mukurumbira Nhau
Kunyange zvazvo Kevin achitanga nemakwikwi, kwaiva maitiro ake aiita kuti ave mukurumbira. Akatanga basa rake mu2002 ane basa muAmerican sitcom 'Undeclared' uye akaitawo firimu yake gore irorochete nekutarisa mufirimu yemufananidzo 'Paper Soldiers'.
Kwemakore akatevera, Kevin akabatanidza mukurumbira wake wekukurumidza-nyowani nemitambo yake mumabhaisikopo anosanganisira "Funga Semurume" (2012), "Kukwikwidza Mechi" (2013) uye "Kutasva Pamwe" (2014). Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kevin Hart mufirimu "Funga Semurume" (2012).
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Relationship Life Facts
Kevin Hart ave akaroora kaviri sepanguva yekunyora. Tinokuudza chokwadi pamusoro penyaya yake yekufambidzana, kukundikana kwewanano uye ikozvino hukama hupenyu. Kutanga, mutambi haazivikanwe kuva nevanasikana vasati vasangana nemudzimai wake wokutanga uye mutambikadzi, Torrei Hart. Mhando dzebonde dzinotora mwedzi miviri vasati varoora paC22nd yaMay 2003.
Kevin Hart nemukadzi wake wekutanga Torrei Hart.
Kusvikira kurambana kwavo mu2010, vevakaroora 'muchato wakakomborerwa nevana vaviri, mwanasikana, Heaven Hart (akazvarwa munaKurume 14, 2005) pamwe nemwanakomana, Hendrix Hart (akazvarwa Gumiguru 8, 2007).
Kevin Hart nemwanasikana Heaven Hart uye mwanakomana Hendrix Hart.
Kufamba paKevin wakatanga kufambidzana nomudzimai wake wechipiri, Eniko Parrish waakaroora naye musi we 13th waAugust 2016.
Kevin Hart Nemukadzi Eniko Parrish.
Rimwe gore gare gare hukama hwavo hwakakomborerwa nemwanakomana, Kenzo Kash Hart akaberekwa pa 21st yaNovember 2017. Vakaroorana vachiri kufara vakaroorana sepanguva yekunyora uye vanotarisira kuva nevana vakawanda.
Kevin Hart nemwanakomana Kenzo Kash.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Kevin Hart akaberekerwa mumhuri ye4. Tinokuudza chokwadi pamusoro pemitezo yemhuri yake iri pedyo nekuwedzerwa.
Nezve baba vaKevin Hart: Henry Witherspoon ndibaba vaKevin. Aive akapindwa muropa nezvinodhaka panguva yehupenyu hwaKevin hwepakutanga. Nekuda kweizvozvo, Henry aisakwanisa kuve baba vakanaka panguva iyoyo. Nekudaro, Henry apora kubva mukusvuta kwake uye ari mumamiriro akanaka naKevin.
Kevin Hart nababa vake Henry.
Nezve amai vaKevin Hart: Nancy Hart ndiamai vaKevin. Iye oga-akasimudza akasimudza Kevin nemukoma wake Robert mukati memakore ayo murume wake dambudziko remushonga akamuona achipinda nekubuda muJeri. Amai vaigara vachitsigira vakabatsira kuumba nyaya yaKevin yehucheche nekutsigira zvaaida mukomedhi uye akatobatsira kupa rutsigiro rwemari rwekutanga urwo Kevin aida kuti abudirire kutanga basa rake mukuseka. Akararama kwenguva yakareba zvakakwana kuti aone Kevin rekodhi achivimbisa kufambira mberi asati afa nekenza pa12th yaMay 2007.
Mudiki Kevin Hart naamai vake Nancy.
Nezve hama dzaKevin Hart: Kevin haana hanzvadzi (s) asi hama yakwegura inonzi Robert. Akakurira naKevin uye akabatsira kuita kuti zvirongwa zvekuita baba vavo vadzoke zvakare. Vose vakoma nevana vanoda vabereki vavo uye vave vachitsigirana.
Kevin Hart nemukoma wake Robert.
Nezve Hama dzaKevin Hart: Kure kubva kumhuri yepedyo yaKevin zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake nasekuru naambuya. Muchiedza chimwe chete, ana babamunini, babamunini uye babamunini avo vachiri kuzogadzira hunyanzvi hweku online naye. Same anoenda achiyambuka bhodhi revazukuru vake nevanin'ina.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Chii chinoita kuti Kevin Hart abike? gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kwehunhu hwake kuti akubatsire iwe uve nemufananidzo wakazara wake. Kutanga, Kevin's persona isanganiswa yekenza zodiac maitiro. Iye akangwara mune zvemweya, akasika uye akasimba.
Akavhurika kuti agovane nyaya dzine chekuita nehupenyu hwake hwega uye hwepachivande uye aisazorega kuita majee anozvidza pamusoro pake. Zvekuvaraidza zvaKevin zvinosanganisira kutamba poker, kuona mafirimu, kuverenga mabhuku uye kutandara neshamwari. Iye zvakare anofarira mumimhanzi, basketball mitambo uye marathon nhangemutange.
Kevin Hart akafananidzirwa naLeBron James ane zvido mu basketball pakati pezvimwe zvinhu.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Lifestyle Facts
Kevin Hart ane mambure anodarika $ 120 mamiriyoni sapanguva yekunyora. Kuongorora kwekuwana kwake nekushandisa maitiro kunomuratidza semunhu anorarama hupenyu hwepamusoro mune zvaanokwanisa.
Kugara kwake kuLos Angeles, CA nzvimbo inokwana $ 2 mamirioni, mari iri pasi pechikamu chidiki cheKevin chakakosha. Kunyange zvakadaro, ine makamuri eDeluxe uye mamiriro ezvivakwa zvehunyanzvi. Nezve ake mota kuunganidzwa, Kevin akaonekwa achifamba nemigwagwa ine mota dzemitambo dzinogadzirwa nemhando dzakadai saFerrari, Mercedes neFord.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Chokwadi chisina chokwadi
Kuputira Kevin Hart kubwinya kwehupenyu hwedu pano pane zvimwe zvisingazivikanwi kana zvishoma zvakazivikanwa izvo zvisingawanzobatanidzi muhupenyu hwake.
Inonakidza yaKevin yeNet Worth ine mavambo ayo kubva kwete kungo mira-kumusoro komedi uye mabhaisikopo aakamboita asi kubva mukubvumidzwa kwake kunoenderana nemhando dzakadai sekutsika tsoka, Hyundai, Nike pamwe neH & M.
Kevin Hart anotsigira Nike pakati pezvimwe zvigadzirwa.
Nezvechitendero chake, Kevin Hart akakwidziridzwa sechiKristu neamai vake vechitendero. Iye achiri kutora chitendero mukuremekedzwa uye akamboti "Mwari Akandiitira Zvakanaka" mushure mekubata MTV's Video Music Awards mu2012.
Akamira pa5 ft 4 inches (1.63 m) Kevin murume akapfupika murume. Nekudaro, anoshandisa kureba kwake kushomeka kubhenefiti yake nekuseka chimiro chake uye akatotanga mutambo we iPhone unonzi "Little Jumpman". Mutambo unoda vatambi kuti vabatsire Kevin kukurira matambudziko akatwasuka nekusvetuka kubva pamapuratifomu kusvika kumatunhu akasiyana.
Screenshot yaKevin Hart nhare mbozha "Mudiki Jumpman".
Kevin akafanana nevanonyanya kuzivikanwa vasingasunungurwi nematambudziko. Akambove akasungwa nekuda kwekutyaira pasi pesimba rewaini. Kevin haana kukumbira mharo uye akatongerwa makore matatu ekuedzwa.
Mutambi haana mifananidzo uye anonyanya kushingaira mukuratidza rudo. Iye haanawo nyaya nekunyorera uye kunwa pane zvishoma.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kevin Hart Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!